डा. शर्माको इन्ट्रीसँगै काठमाडौं मेडिकल कलेजमा ओपीडी निःशुल्क – Koshidaily
मुख्य पृष्ठयौन/स्वास्थ्यडा. शर्माको इन्ट्रीसँगै काठमाडौं मेडिकल कलेजमा ओपीडी निःशुल्क
डा. शर्माको इन्ट्रीसँगै काठमाडौं मेडिकल कलेजमा ओपीडी निःशुल्क
काठमाडौं, १७ भदौ । काठमाडौंको सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले ओपीडी निःशुल्क गरेको छ । यसअघि प्रतिबिरामी १ सय रुपैयाँ ओपीडी शुल्क लिँदै आएको अस्पतालले बिहीबारबाट लागू हुनेगरी ओपीडी निःशुल्क गरेको हो ।
विराटनगरस्थित नोबेल शिक्षण अस्पतालका सञ्चालकसमेत रहेका डा.सुनिल शर्माले काठमाडौं मेडिकल कलेजको अध्यक्षको जिम्मेवारी सोमबारबाट सम्हालेका छन् । डा.शर्माको प्रवेशलगत्तै अस्पतालले बहिरंग सेवावापतको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क हटाउने निर्णय लिएको हो ।
बिरामीहरूलाई उपचारमा सहुलियत प्रदान गर्न ओपीडी निःशुल्क गरिएको अस्पताल अध्यक्ष डा.शर्माले जानकारी दिए । काठमाडौंको सिनामंगल र भक्तपुरको दुवाकोटबाट कलेजको अस्पताल सेवा सञ्चालन भइरहेकाले दुवैमा ओपीडी निःशुल्क हुनेछ ।
सशुल्क उपचार सेवाको दररेट भने पुरानै कायम छ । कोरोना महामारीका कारण अहिले दैनिक करिब २ सय बिरामीको उपचार हुँदै आएको अस्पतालले जनाएको छ ।